Gaaffii mirgaa kaasudhaan Sochiin barsiisotni magaala Finfinnee eegalan gara naannolee adda addaattis babal’achuu eegaleera. | Biiftuubilisummaa
← Waldiddaan barattoota Oromoo fi Basaasota TPLF jidduu Jabaachaa Dhufe.
Gaaffiin Barsiisotaa gaaffii Cunqurfamoota hundaa waan ta’eef, cunqurfamoota biyyattii hundarraa itti-hirmaannaatu barbaadama! →
Posted on April 1, 2012	by biiftuubilisummaa
Barsiisotni Magaala FF “Mindaa argachaa jirruun jiraachuu hin dandeenye; mindaan mootummaan dabale jedhu ittuu rakkoo keenya hammeesse waan ta’eef hanga gaaffiin keenya deebii quubsaa argatutti hin barsiisnu; qabsoo eegalle itti fufna!” jechuun ijjannoo isaanii cimsatanii gara diddaa cimaatti seenuuf of qopheessaa, wal ijaaraa jiru. Wixata dhufu kana fincila waliigalaa eegaluuf jecha barsiisota guutuu biyyaatifs waamicha dhiyeessaniiru. Haaluma waamicha dhiyaateen Barsiisotni Go/Lixa Shawaa, kaaba Shawaa, Horroguduruu Wallaggaa fi Baha Shawaa waamicha dhiyaateef qophii xumuraa akka jiran hubatameera.
Haaluma walfakkaatuun Barsiisotni Naannoo Amaaraa Godina Gondor, Dasee, fi Dabra birihaan fincila waliigalaa kanatti dabalamuuf qophii xumuraa akka jiran dhagahameera. Sochiin kun suuta suuta barattoota fi hojjattoota biroos hammatuun akka hin oolle tilmaamamaa jira.
Bakka-buutota mootummaa Wayyaanee Kan ta’an hoggantoonni Waldaan Barsiisota Itiyoophiyaa ibidda qabate kana dhaamsuuf guyyaa guyyaadhaan Walga’ii hatattamaa taa’aniyyuu harka daaraa hammaare ta’aniiru. Barsiisotni “isin hin beeknu; bakka nu hin buutan” jechuudhaan walga’ii keessa keessaa barsiisota tokko tokko yaamuuf yaalanis harkatti didaa jiru.
Barsiisotni Magaala Finfinnee hojii erga dhaabanii har’a guyyaa sadaffaadha.
Sababni ka’uumsa sochii kanaa akkuma kanaan dura ibsine daballii mindaa mootummaan gaaffii barsiisotaa ukkaamsuuf jecha maqaaf taasisuun (qar. 85 gadi) sadarkaa isaanii immoo gadi bute kun kan haamilee isaanii cabsee fi caalattuu kan jireenya isaanitti hammeesse (daballii kiraa manaa fi meeshaalee itti fide), waan ta’eef kana booda jiraachuu waan hin dandeenyeef haala kana qabsoon jijjiiruu filatan.
Karaa biraa haalli kun gaaffii mirgaarraa gara gaaffii siyaasatti ce’uu danda’a jechuun mootummaan akkuma amala ishii gaaffilee ka’an kana humnaan ukkaamsuuf hidhaa, ajjeechaa fi namoota funaantee gara dabarsuuf qophii taasisaa akka jirtu keessa beektonni dudubbachaa jiru. Kun taanan immoo caalattu fincila biyyoolessaa akka kaasuu malu hogeeyyin siyaasaa tilmaama isaanii gaazexoota biyya keessaa irratti daddarbachaa jiru.
Karaa biraa immoo Barsiisotni fi barattoonni Yunivaristii FF, Mooraa “School of Journal” jiran jijjiirraa mootummaan sadarkaa mooraa kanaa gadi buusudhaan gara dipaartimantii fi ‘unit’tti gadi xiqqeesse mormodhaan hojii baruu fi barsiisuu dhaabudaan keessayyuu guuyyaa kaleessaa waaree booda baayyinni isaanii gara 300 kan ta’an petition qopheessudhaan mormii cimaa dhageessisaa akka oolan dhagahameera. Haala kana “qabbaneessuuf” jecha mootummaan hojjattoota fi barsiisota mooraa kanaa Bitootessa 29,2012 walga’ii hatattamaa yaamte itti hin milaayiin hafuu gabaafama.
KQWUO fi SAGLIIwwan isa jala jiran marti sochii barsiisota FF fi haala waliigalaa kana kaayyoo fi itti-gala lafa kaayyamen wal simsiisuf carraaqqii guddaa taasisaa akka jiran gabaasi nu gahe addeessa.